Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii billaha ahaa ee hawl-wadeenka Jaaliyada Ogadenia ee gobolka Victoria oo guul ku soo dhamaaday.
Shirkii billaha ahaa ee hawl-wadeenka Jaaliyada Ogadenia ee gobolka Victoria oo guul ku soo dhamaaday.
Hawlwadeenka Jaaliyada Ogadenia ee magaalada Melbourne ayaa isugu yimid kulankoodii bil kasta ay qaban jireen, Kulankan muhiimka ah ee hawlwadeenka jaaliyadu lahaayeen maanta ayaa waxaa sidii caadiga ahayd lagu furay Aayado Qur’aan ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay mid ka mid ah culumada Jaaliyada.
Ajandayaasha ugu waaweynaa ee kulanka lagaga hadlaya ayaa waxaa kamid ahaa:
1) Abaabulida iyo dardar galinta xubnaha jaaliyada Ogadenia ee ku dhaqan gobolka Victoria gaar ahaan magaalada Melbourne.
2) Xoojinta arrimaha siyaasadeed ee Jaaliyada iyo tan ku aadan dawladan Australia.
3) Soo bandhigida & uruurinta dhibaatooyinka ay Itoobiya ka wado Ogadenia .
4) Isku xidhnaanta Jaaliyadaha ka jira Australia.
5) Horumarinta Bandhigyada iyo xalfadaha la qabto maalmaha ciida.
Qodobadan kor kuxusan iyo kuwa kale oo badan ayay xubnuhu mid kastaba si xeel-dheer uga hadleen iskuguna baraarujiyeen in ay si wada jir ah u wada qabtaan iyo Xoojinta hawlaha lama huraanka ah ee u yaala hawlwadeenka Jaaliyada, markastana si isku duubni leh uga soo dhalaalan waajibaadka kaga aadan hurumarinta qadiyada Ogadenia.
Isku soo wada duuboo, Kulankan maanta wuxuu ahaa mid muhiim u ah Jaaliyada guud ee Ogadenia ee Victoria Melbourne. hawlwadeenka Jaaliyadu waxey wayahan dambe ku dadaaleyeen sidii ay u horumarin laheed arrimaha ku aadan fidinta qadiyada oo laga dareemayo Gobolkan Victoria.
Shirkan wuxuu ku soo gaba gaboobay sidii loo baahnaa, iyadoo hawlwadeenka jaaliyadu howlohoodii ay qaban lahaayeen ay iskugu dardaarmeen. GUUL IYO GOBONIMO.